जन्मदेखि नै भाग्यमानी हुन्छन् यी ३ राशीका व्यक्ति, हेर्नुहोस् तपाईंको कुनको राशी ? – Sandesh Press
जन्मदेखि नै भाग्यमानी हुन्छन् यी ३ राशीका व्यक्ति, हेर्नुहोस् तपाईंको कुनको राशी ?
June 17, 2021 371
काठमाडौँ । कयौँ मानिस यस्ता हुन्छन्, जो धनवान बन्नका लागि कयौँ उपाय अपनाउछन्। तर पनि सफल हुँदैन। जबकी केही मानिस कम मेहनत मै अधिक सफलता हात पार्छन र धनवान हुन्छन्। जसको ठूलो कारण हुन्छ ग्रह र नक्षत्रको चाल।सफलताको पछाडि मेहनत र योगदान हुन्छ।
तर सफलताको मार्गमा ग्रह र नक्षत्रको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ।केही मानिसको जन्म शुभ मुहूर्त अर्थात निकै राम्रो समयमा हुने गर्छ। जसका कारण उनीहरु जन्मदेखि नै भाग्यमानी सावित हुन्छन्।यस्ता मानिसको जन्म धनी परिवारमा होओस् वा गरिब । यिनीहरुलाई सफल र धनी बन्न कसैले रोक्दैनन्। आज हामी त्यस्ता केही राशिका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । जो जन्मजात नै भाग्यमानी हुन्छन्।
आउनुहोस् जानौँ कुन कुन हुन् ती राशि
मिथुन राशि: यस राशिका मानिस निकै भाग्यमानी मानिन्छन्। यस राशिका व्यक्तिलाई हरेक काममा सफलता मिल्ने गर्छ। अन्य मानिसको भन्दा यस राशिका मानिसलाई दुई गुणा बढी सफलता मिल्ने गर्छ। जन्मसिद्ध भाग्मानी मानिने यी राशिका व्यक्तिलाई सधैँ भाग्यले साथ दिने गर्छ।
सिंह राशि : राशिका मानिसको दिल निकै ठूलो हुने गर्छ। तर पैसाको मामिलामा भने यिनीहरु थोरै कन्जुस हुने गर्छन्। जसका कारण यिनीहरुले धेरै बचत गर्ने गर्छन् र भविष्यमा हानी कहिलै खेप्नु पर्दैन्। साथै यस राशिका मानिस अरुका सामु झुक्न रुचाउँदैनन्।
कुम्भ राशि: फैसला त जो कोहीले लिने गर्छन्। तर कुम्भ राशिका मानिसले कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा अगाडि आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्ने गर्छन्। कसैले भने सुनेकै भरमा यिनीहरुले काम गर्दैनन्।यस राशिका मानिसले बोल्दा संयम पुर्याउने गर्छन्। पैसा कमाउनु यिनीहरुका लागि खेल जस्तै हुने गर्छ। जुन क्षेत्रमा हात हालेपनि सफलता मात्रै मिल्ने गर्छ।
Prev१ रुपैयाँको सिक्कालाई यसरी पूजा गर्ने स्थानमा राख्नुहोस्, पाइनेछ सधै लक्ष्मीको साथ
Nextआफ्नो जन्ममिति अनुसार अपनाउनुहोस् यस्तो उपाय प्राप्त हुनेछ नसोचेको धन
मेरी बास्सैकी ‘चम्सुरी’ को अस्पतालको शैयामा रुवाबासी, जीवन बचाईदिन अनुरोध (भिडियो)